Ukwenziwa ngokutsha: Indlela ukwamkela utshintsho oluya kulukhulisa ngayo uphawu lweNkampani yakho | Martech Zone
Ukwenziwa ngokutsha: Indlela ukwamkela utshintsho oluya kulukhulisa ngayo uphawu lweNkampani yakho
NgoLwesihlanu, Oktobha 29, 2021 NgoLwesihlanu, Oktobha 29, 2021 UYuliia Mamonova
Iyahamba ngaphandle kokutsho ukuba ukuphinda kufakwe igama kwakhona kunokuvelisa iziphumo ezilungileyo kakhulu kwishishini. Kwaye uyazi ukuba oku kuyinyani xa iinkampani ezisebenza ngokukhethekileyo ekudaleni iibrendi zezona ziqala ukuvelisa kwakhona.
Malunga ne-58% yee-arhente zenza igama ngokutsha njengendlela yokukhulisa ukukhula okubonakalayo ngobhubhani we-COVID.
I-Advertising Agency Trade Association
Thina Lemon.io uzibonele ngawakho ukuba kungakanani ukuphinda kuphawulwe ngokutsha kunye nokungaguquguquki kophawu lwebrendi kunokukubeka phambili kukhuphiswano lwakho. Nangona kunjalo, siphinde safunda ngendlela enzima ukuba kulula njengokuphinda kuvakaliswe, kungaphezulu nje kokuphuhlisa ilogo entsha okanye ukufumana igama elitsha. Endaweni yoko, yinkqubo eqhubekayo yokudala kunye nokugcina isazisi esitsha - ngokuqhubekayo uhambisa umyalezo ofuna abathengi bakho banxulumane nebrand yakho.
Uphawu olulungileyo kuwo onke amaqonga lunyusa kakhulu ingeniso yombutho ukuya kuthi ga kwipesenti ezingama-23.
LucidPress, iSimo sokuZimba kophawu
Kwaye oku kukukhankanya nje ezimbalwa. Kweli nqaku lifutshane kunye nenqaku, siza kukuhamba ngenkqubo yokwenziwa ngokutsha, sabelane ngeengcebiso, siveze imigibe eqhelekileyo, kwaye sikubonise indlela yokuyiphepha.
Ibali leLemon.io Rebrand
Kuthatha kuphela imizuzwana esi-7 ukwenza umbono oqinileyo wokuqala.
Oko kuthetha ukuba imizuzwana esixhenxe inokuba yiyo yonke into onayo yokuqinisekisa umthengi onokuthi akukhethe ngaphezu kokhuphiswano lwakho. Ngelixa oku kungumqobo kukodwa, ukukholisa abathengi ngokuqhubekayo ukuba baqhubeke bekhetha wena kunzima ngakumbi. Oku kuqondwa kusikhokelela kwimpumelelo esixakeke kuyo namhlanje.
Makhe ndikuvumele ngokufutshane kwimbali ye-lemon.io.
I-Lemon.io yaqala ukuphuhliswa kwi-2015 xa umsunguli (u-Aleksandr Volodarsky) echonga i-gap kwi-freelancer hiring niche. Ngelo xesha, uphawu yayiyeyona nto yokugqibela ezingqondweni zethu. Njengamashishini amaninzi amatsha, senze iimpazamo ekuqaleni kohambo lwethu, enye yazo ibizithiya “iCoding Ninjas.” Ndikholelwe, yayivakala ilungile ngela xesha kuba yayikwifashoni, kwaye sasibeke uninzi lokugxila kwethu ekudaleni umxholo.
Nangona kunjalo, siye savuka kakubi xa safumanisa ukuba ukukhula kweshishini kuye kwacotha kwaye umxholo wodwa wawungasondeli nokuba wanele kwimpumelelo yeshishini lethu. Besifuna okungaphezulu koko ukuze sifikelele kwihlabathi elikhuphisanayo lokuqesha abantu abazimeleyo. Ngeli xesha ibali lethu lokuphinda liqale.
Zininzi izifundo ezichulumancisayo esizifundileyo kuhambo lwethu lokurhweba ngokutsha, kwaye siyathemba ukuba, njengokuba sibalisa ibali lethu, usenokukhetha ezimbalwa eziya kuxhamlisa igama lakho.
Kutheni i-Rebrand yayifuneka
Usenokuba uyazibuza ukuba kutheni kufuneke siphinde sivelise kwakhona kwaye kubaluleke ngantoni.
Ewe, ngaphandle kwento yokuba sasidlulile kwixesha le-Ninjas kunye ne-Rockstars kwaye sabelane ngegama lakudala kunye nesikolo seprogram e-India, siye saqonda ukuba kufuneka sithathe amanyathelo ukuze siphile kukhuphiswano lwemalike yokuzimela. I-niche yeemarike ezizimeleyo eziqinisekisiweyo zixinene kangangokuba ekuphela kwendlela yokugqama kukuba ne-brand eyomeleleyo kunye ne-stellar.
Ekuqaleni, sasikholelwa ukuba ukusilela kwethu kungenxa yoyilo lwethu, kwaye sakhawuleza ngeenyawo ukuya kumyili saza samcela ukuba ayihlele ngokutsha ibhlog, apho walile ngembeko kwaye wacebisa ukuba iphinde yenziwe ngokutsha. Yayisisikhonkwane sokugqibela ebhokisini, kwaye kwakungelo xesha, imfuneko yokubuyisela igama layo yabonakala. Ngapha koko, siye saqonda ukuba asinalo uphawu konke konke, kwaye ngenxa yoko, kwafuneka siyile. Esi sesona sigqibo sikhaliphileyo nesinemivuzo esakha sazenza njengentlangano.
Nali inyathelo ngenyathelo lesifinyezo sendlela esiqhube ngayo inkqubo yokutshintsha igama kwakhona. Izikhokelo zethu aziphelelanga; nangona kunjalo, siya kuba nesisa kangangoko sinakho ngolwazi oluvela kumava ethu. Nasi isishwankathelo samanyathelo esiwalandelayo:
Senza i-brand persona kunye ne-brand mascot -Ubudlelwane phakathi kwezi zibini bunje: I-brand persona ngumlinganiswa ophambili webali lakho, oya kudibana nemiqobo endleleni eya kwiinjongo zabo. I-brand mascot yenye eya kubanceda boyise bonke ubunzima kwaye ekugqibeleni bafikelele usukelo lwabo. Ngokwenyani, i-brand persona imele abaphulaphuli esijolise kubo okanye abathengi, kwaye i-mascot imele thina abanjongo yabo ikukusombulula iingxaki zabo.
Size nemephu yeBrand Persona's Buying Decision (BPBD). -Imephu yeBPBD luluhlu lwezizathu eziya kunyanzela abaphulaphuli esijolise kubo ukuba bathenge into kuthi kunye nezizathu ezinokuthi zibenze bangafuni. Oku kusincedile ukuba siqonde izigqibo zokuthenga ze-brand persona kwaye sazi ukuba yeyiphi indlela yokuziphatha enokuthi ibeke ecaleni. Inkqubo ibandakanya ukudwelisa izizathu zokuba kutheni okanye kutheni abantu esijolise kubo bangathenga kuthi.
I-matrix ye-brand essence – Le ibiyindawo yokunyusela yohlobo lwethu echaza zonke izizathu kunye neendlela zobukho beshishini lethu. Ibonisa into eyenziwa lishishini lethu kwaye inxibelelane neenqobo zophawu lwethu.
Ibali leBrand -Ibali le-brand lisikhokelele kwelona gama lifanelekileyo, esathi ekugqibeleni samkela.
Iziphumo zeLemon.io zokuTshintsho
Iingenelo ezingabonakaliyo zokwenziwa ngokutsha ziquka ukuba kusizisele ukuzithemba, ukuphefumlelwa, ukuqonda intsingiselo nenjongo, singasathethi ke ngokuthontelana okumonelekayo kwezikhokelo.
Kwaye, ewe, eyona nto ibalulekileyo sisiphumo sokuba ukwenziwa ngokutsha kube nakho kumgca wethu osezantsi. Eyona ndlela ilungileyo yokubonisa oku ngamanani kuba amanani awaxoki.
Iziphumo bezintle kwaye zisibonile sifikelela phantse kwi-60% yebenchmark yetrafikhi iyonke efunyenwe kwiminyaka emihlanu edlulileyo kwisithuba seenyanga ezilishumi sokusungula uphawu lwethu lweLemon.io.
Ukubuyiselwa kwebrand epheleleyo kusibonile sisuka kwiindwendwe ze-4K ukuya kwi-20K kwi-avareji kwinyanga yethu engcono. Sifikelele ekunyukeni okumangalisayo okuphindwe kayi-5 kwiindwendwe zethu kunye neentengiso ezisibeka kumkhondo we-10M GMV ngo-2021.
Ngaphambili: Ukufaka ikhowudi yetrafikhi ye-Ninjas ukusuka ekuqaleni kwenkampani ukuya kuthi ga kwintengiso kwakhona:
Emva: Inkqubela phambili eyenziwe kwisithuba seenyanga ezilithoba zokwenziwa ngokutsha.
Kufuneka wenze ntoni kwakhona ukuba ungumntu wokuqala (ngokusekwe kumava eLemon.io)?
Ixesha liyinto yonke. Ukwenziwa ngokutsha kufuna umsebenzi omninzi kwaye kudla izibonelelo ezininzi, kwaye kubalulekile ukwenza izigqibo ezibaliweyo.
Liliphi elona xesha lifanelekileyo lokurhweba ngokutsha?
Kwi-Lemon.io, besisazi ukuba lixesha lokutshintsha umfanekiso wombutho wethu xa:
Yayingasebenzi! Esona sizathu siphambili sokwenziwa ngokutsha ibikukuqonda ukuba uphawu lwethu lwangoku aluzisi ziphumo zinqwenelekayo. Kwimeko yethu, yayiyitrafikhi encinci esasiyifumana phantsi kwe "Coding Ninjas". Sikholelwa ukuba kufuneka siwuphucule umxholo wethu de ekugqibeleni siqonde ukuba sikwindawo engafanelekanga kwimarike, kwaye kufuneka siphinde sitshintshe ukuze sigqame.
Kwakukho utshintsho olubalulekileyo kwishishini lethu -Iinkampani zihlala zivela. Ukuba ishishini lakho liyatshintsha okanye ulungelelanise kakuhle uhlobo lwedemografi oyinqwenelayo kwaye ufuna ukungena kulo ngempumelelo ngakumbi, ukuphinda wenze igama kwakhona kunokuba lukhetho. Phambi kokutshintshela kwiLemon.io, siye sasebenza olunye uhlobo olubambekayo kunye nabathengi, abathi ekugqibeleni basinceda senze ukhetho olungcono kwaye sibethe iindawo ezifanelekileyo.
Ngaphambi kokuba sidume kakhulu -Sibe nenyhweba yokubuyisela igama kwakhona ngaphambi kokuba sidume phantsi kwegama langaphambili. Asinakuyikhanyela into yokuba imingcipheko enxulumene nokuphinda kuphawulwe ngokutsha iyanda ngokunyuka kodumo. Phambi kokuba uqatshelwe, imingcipheko iphantsi njengoko abantu bengasayi kuqaphela.
Sasinezixhobo ezaneleyo -Ukwenziwa ngokutsha kubutyebi obunzulu, ngoko kufanelekile xa sele uneshishini elikuzuzele izixhobo ezaneleyo zokusungula inkqubo yokwenziwa ngokutsha.
Xa ingelilo ixesha elilungileyo lokwenziwa ngokutsha?
Ukwenziwa ngokutsha makungaze kwenziwe ngaphandle kwesizathu esibambekayo. Uyazi ukuba inkuthazo yakho yokuphinda wenze igama kwakhona ayilunganga xa ivela kwiimvakalelo kunezinyani.
Ukruqukile kuyilo lwelogo? Ukukruquka sisizathu esibi sokwenza igama kwakhona. Ngenxa yokuba awusayi kufumana ilogo enomtsalane ngokwaneleyo akuthethi ukuba kufuneka uyitshintshe. Iindleko aziyifanelanga inzuzo.
Xa kungekho nto itshintshileyo kwintlangano yakho -Ukuba akukho tshintsho lubalulekileyo kumbutho wakho, ukuphinda ubhalwe kwakhona akunanjongo. Akukho mfuneko yokutshintsha inkqubo esele isebenza.
Kungenxa yokuba abo bakhuphisana nabo baphinda benza igama kwakhona – Akukho mfuneko yokuba uhambe nesihlwele. Isigqibo sakho sokubuyisela igama kwakhona kufuneka sisekelwe kwiimfuno zakho zomntu ngamnye kunye nokuqonda kwakho iinjongo zakho zexesha elide kunye nombono jikelele.
Ukwenziwa ngokutsha njengotyalo-mali lwexesha elizayo kwishishini lakho
Yinyaniso engenakuphikiswa ukuba nangona kukho inkcitho enkulu yexesha kunye nezibonelelo ngexesha lenkqubo yokulungiswa, ukutshintshwa kwegama kusoloko kulutyalo-mali kwixesha elizayo. Isiphelo sithethelela zonke iihustles ezibandakanyekayo kwinkqubo. Njengoko besibonisile ngaphambili, amanani abonisa ukunyuka okubalulekileyo kwintengiso emva kokuba siphinde sayibranda. Inkqubo yayinobubele kumgca wethu ophantsi kunye nomfanekiso wethu wenkampani.
Ukwenziwa ngokutsha okunobuchule kwandisa ukusebenza ngokupheleleyo kwenkampani, kukhuthaza ukuma okucacileyo, uphuhliso lweemarike ezintsha kunye neendawo zokusebenza.
Inkqubo yokwenziwa kwebrand okanye ukuphinda kuphawulwe ngokutsha ngumsebenzi orhafisa kakhulu ophawulwa ngokunyuka nokuhla okungaphezulu kunokuba kunokubonakala kwibali lethu. Kuthatha isicwangciso esilumkileyo, ixesha elichanekileyo, kunye nezixhobo ezaneleyo zokuyilungisa kwaye wenze uphawu oluya kwenza ingxelo ngenene, luphucule umvuzo wakho kwaye luphucule umfanekiso wakho woluntu. Ukubuyisela igama kwakhona kuthetha ukwenza uphuculo ukuze uhambisane namaxesha.
tags: umbutho worhwebo wearhenteI-BPBDuhlobouphawu lwemascotIsigqibo sokuthenga se-brand personailamuni.iolucidpressUkubuyiswa kwakhona
Ngeminyaka eyi-5 + kwintengiso yedijithali, uYuliia uqhuba Lemon.ioUkukhula ngokubhala kwakhe kunye nemiyalezo ecacileyo. Umbhali kunye nomphandi entliziyweni, uYuliia uyayiqonda indlela yokuzibandakanya nokufunda kunye nokwakha ibali eliya kugqama. U-Yuliia ubhale ngaphezulu kwe-1500+ iziqwenga kule minyaka imbalwa idlulileyo elungisa umhlaba we-FinTech, uqalo, kunye nokuthengisa umxholo ngezakhono zakhe.